Hindiya - ALinks
Maqaallada ku saabsan India
Cun iniinyahaan si aad u xoojiso Difaacaaga
April 22, 2021 Maitri Jha Hindiya, waxyaabo waxtar leh
Dhammaanteen waxaan ku xannibannahay guryaheena sida meeraha loola dagaallamayo dilaaga Covid-19. Difaaca ayaa ah faa iidada caafimaad ee qof waliba doonayo. Talooyinka ay soo saareen mas'uuliyiinta caafimaadka adduunka ayaa dadka ku dhiirrigeliya inay cunaan si caafimaad leh. Dadka cuna cunno isku dheelitiran
Udubka selfie ee ugu fiican iPhone Hindiya
Ma waxaad raadineysaa mid ka mid ah ulaha iswada ee ugu fiican iPhone-ka Hindiya? Hagaag, uma baahnid inaad sii eegtid waxbadan. Waxaan daabacnay liiska ulaha iswada ee ugu fiican iPhone Hindiya. Hadaadan rabin inaad qatar gasho
1 2 3 ... 8 Xogta ku xiga»